Esinokwethenjelwa seLeica Microscope M320 | I-OptiSmile ™ Advanced Dentistry
Ibona ukuhlukana kwezinwele
Thola Imiphumela Engcono Kakhulu
Gcina Ukumamatheka Kwakho Okuhle
Ubuchwepheshe bamazinyo kusuka ngokuzayo. ikusasa lokwelashwa kwamazinyo.
Ukuzijwayeza kwethu kuhlome ngobuchwepheshe bokwelashwa nobuchwepheshe obugqwesayo emhlabeni, okusho ukuthi amazinyo angenakuqhathaniswa kukho konke ukwelashwa kwakho kwamazinyo, kusuka enkambisweni elula kuya kokuthuthuke kakhulu.
Bhuka ukubonisana kwakho kwamavidiyo wamahhala
Vala eduze futhi ube nomuntu ngesibonakhulu se-leica
Amazinyo mancane. Lokhu kwenza kube lula kakhulu ngeso lenyama ukuphuthelwa imifantu emihle ezinyo. Manje cabanga ngokusebenza engxenyeni ethile yezinyo. Incane kakhulu. Kungakho amazinyo abhekwa njenge-microsurgery - Zonke izivivinyo zamazinyo nezinqubo zenziwa ngokukhulisa okuphezulu kakhulu okutholakalayo.
Ngokukhanya okudumile komhlaba kanye namazinga wokukhulisa angu-6, i-microscope yethu yeLeica iletha izithombe ezicwebezelayo ezinokujula okungakholeki kwenkundla. Isivumela ukuthi sisondeze amandla angama-40 x ukuze sikwazi ukubona nokuhlonza izinkinga lapho zisaqala, kudala ngaphambi kokuba kube nzima ukuzilawula.
Ukukwazi ukusebenza eduze kuvumela ukwelashwa kwamazinyo okulondolozayo nokuvimbelayo, kunciphisa ithuba lokwehluleka noma lokuphindela.
Akunandaba noma yini ukukhathazeka kwakho kwamazinyo okungaba khona. Isikhungo se-OptiSmile Advanced Dentistry and Implant Centre sihlonyiwe ukukusiza ukuthi uzuze ukumamatheka okuzethembayo obukade ukufuna.
Umphumela wokubulala amagciwane ezindaweni ezisetshenziswayo ukunciphisa amagciwane.
Ikhwalithi ye-premium ebonakalayo yokuhlonza izingqinamba ezisayizi bezinwele emazinyweni
I-OptiSmile igunyaze ukunikeza iziguli zethu imiphumela eziyidingayo.
Chofoza lapha ukuze uqale ukubonisana kwakho kwamahhala kwamazinyo ku-inthanethi
Ukwelashwa kwekhwalithi evunyelwe i-OptiSmile
Sizohlola yonke indawo yomlomo wakho, amazinyo nezinsini ukuthola noma yiziphi izimbangela zokuphefumula kwakho. Ukuhlolwa ngokuphelele kuzosivumela ukuthi sihlolisise inkinga futhi sikunikeze uhlelo lokwelashwa olunembile.
Kwa-OptiSmile sihlala njalo sihamba phambili kubuchwepheshe besimanje namazinyo okusiza iziguli zethu. Sizokweluleka ngezinto zokuxubha ezikhethekile, i-floss nolimi olusebenzayo olusebenzayo futhi luvunyiwe yi-OptiSmile.
Uma usuhlele ukubonisana nokwelashwa kwakho kokuqala, kubalulekile ukuthi ubonane nodokotela wamazinyo wakwa-OptiSmile njalo ukukusiza ugcine impilo yamazinyo esezingeni eliphakeme kakhulu futhi uqinisekise ukuthi imiphumela yakho ihlala impilo yonke. Faka imali ekumoyizeleni kwakho!
Insizakalo yamazinyo Yomhlaba Wonke
Odokotela bethu bamazinyo eKapa bazibophezele ekwenzeni uzizwe ukhululekile, ngenkathi futhi behlinzeka ngemiphumela esezingeni eliphakeme. Sihluke kakhulu emsebenzini wethu ukuthi sizongena esikhundleni sokugcwaliswa noma okufakelwayo okungaphuma (ngoba siyazi ukuthi abawutholi!) Konke okudingeka ukwenze ukuthembisa ukubanakekela.
Nge-OptiSmile awusona nje isiguli, ungumndeni. Sizohlinzeka ngamazinga aphezulu kakhulu emisebenzi yamazinyo ekhona emhlabeni futhi siqinisekise ukuthi unalo lonke ulwazi nokusekelwa okudingayo ukuze ugcine ukumamatheka kwakho okuhle, nokuzethemba okusha.
yini ukukhathazeka kwakho kwamazinyo? singasiza.
Ukusuka emazinyweni azwelayo kuya emazinyweni alahlekile ngokuphelele, ngenxa yesimo esiphuthumayo noma ukubola, thola kabanzi mayelana nokwelashwa kwethu.
Ingabe sekuphele iminyaka udokotela wamazinyo ebheka emlonyeni wakho? Ungabi namahloni, ukuvimbela kungcono kunokwelapha!
I-Plaque neTartar Buildup
Unamazinyo anamabala noma aphuzi? Ngabe amazinyo akho asontekile futhi alwela isikhala?
Ngifuna Ukumamatheka Okukhulu!
Ngidinga Amazinyo Aqondile
Ngidinga Ukushintshwa Kwamazinyo
Amazinyo mancane. Lokhu kwenza kube lula kakhulu ngeso lenyama ukuphuthelwa imifantu emihle ezinyo. Manje cabanga ngokusebenza engxenyeni ethile yezinyo. Incane kakhulu. Kungakho amazinyo abhekwa njenge-microsurgery - Zonke izivivinyo zamazinyo nezinqubo zenziwa ngokukhulisa okuphezulu kakhulu okutholakalayo. Ngokukhanya okudumile emhlabeni kanye namazinga wokukhulisa angu-6, i-microscope yethu yeLeica iletha izithombe ezicwebezelayo ezinokujula kwensimu okungakholeki. Isivumela ukuthi sisondeze amandla angama-40 x ukuze sikwazi ukubona nokuhlonza izinkinga lapho zisaqala, kudala ngaphambi kokuba kube nzima ukuzilawula. Ukukwazi ukusebenza eduze kuvumela ukwelashwa kwamazinyo okulondolozayo nokuvimbelayo, kunciphisa ithuba lokwehluleka noma lokuphindela.
Xhumana no-OptiSmile Namuhla
Sincamela ukukushayela kepha uma kwenzeka singakwazi ukudlula sicela usinike ikheli lakho le-imeyili (asisoze sathengisa imininingwane yakho)
[contact-form-7 id = "15252" title = "Imininingwane OptiSmile Namuhla"]